आर्थिक समृद्धिका आधार र अलमल | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण आर्थिक समृद्धिका आधार र अलमल
on: २५ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०७:५९ लेख | दृष्टिकोण
आर्थिक समृद्धिका आधार र अलमल
मुलुककै मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्जमा भेला भएका नेपालभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूको बृहत् जमघटलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्तमान सत्तालाई नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको बताएको खबर धेरैजसो सञ्चारमाध्यममा आए । आर्थिक अभियान दैनिकले पनि आफ्नो मुखपृष्ठमा यो समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्‍यो । एउटा औपचारिक कार्यक्रममा शीर्ष नेतृत्वले बोलेका कुरालाई समाचारका रूपमा ग्रहण गर्ने औपचारिकताको विषय अलग हो । तर, विगतमा दुईपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको पदमा आसीन भइसकेकोमात्र नभएर वर्तमान सत्ता हाँकिरहेको दलको अध्यक्षबाटै आएको सरकारले लगानीयोग्य वातावरण बनाउन नसकेको भनाइले खास अर्थ राख्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा बृहत् लगानी भिœयाएर दोहोरो अङ्कको आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्यमा राखिएको अवस्थामा शीर्ष नेतृत्वको यस्तो अभिव्यक्तिलाई सतही रूपमा मात्र ग्रहण गरिनु हुँदैन ।
सङ्घीयताको व्यवस्थापनमा देखिएका कानूनी र आर्थिक पूर्वाधारका विरोधाभासले यसको उपलब्धिमा पर्याप्त अवरोध देखिइरहेका छन् । सङ्घीय संरचनाहरूको सञ्चालनदेखि लक्षित विकासका निम्ति स्रोतको प्रबन्धसम्मका विषय अलमलमा जेलिएका छन् । कर निर्धारणदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच एकप्रकारको तानातानको दृश्य देखिएको छ । यसले स्रोतको सकसमात्र होइन, सरकारहरूबीच सहकार्य र विश्वासको सङ्कटलाई मलजल पु¥याइरहेको छ । यो सङ्घीयता व्यवस्थापनको अवरोधमात्र होइन, यसले सङ्घीयताको सार्थकता र औचित्यमा समेत आशङ्काको आधारलाई बलियो बनाइरहेको छ । सङ्घीयता नचाहनेहरूले स्रोतमा देखिएको बेथितिलाई भजाउने प्रयास गरेका सन्दर्भहरूको कमी पनि छैन । यसमा सङ्घीयता पक्षधर, खासगरी सत्ता सञ्चालकहरू आवश्यकताजति गम्भीर नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु विषय बनेको छ ।
अर्थतन्त्रको अपेक्षित अभिवृद्धिका लागि सरकारले लगानी आह्वान गरिरहेको छ । तर, खर्बौं लगानी प्रतिबद्धतामा प्रतिवर्ष मुश्किलले २/३ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानीका रूपमा भित्रिने गरेको छ । डुईङ बिजनेश इण्डेक्समा १ सय ७ स्थानमा रहेर पनि दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा अपेक्षित लगानी किन आउन सकिरहेको छैन ? सत्ताको नेतृत्वमा रहेको दलका शीर्ष नेताको भनाइबाटै सरकारी दाबी र रूपान्तरणको धरातलबीचको यथार्थ बुझ्न धेरै असहज पर्दैन ।
सरकारले लगानीकर्तालाई आयको ग्यारेण्टी र लगानीको सुरक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा आश्वस्त बनाएरमात्र हुँदैन, विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । अपेक्षा गरेअनुसारको रकम ल्याउन लगानीकर्ताको आयआर्जन एवम् उपभोगको स्वतन्त्रता र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पहिलो शर्त हुनेछ । बेलाबेलामा लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धता र लगानी परिमाणको अन्तरमात्र पनि हाम्रा भौतिक र कानूनी पूर्वाधार कत्तिको लगानीमैत्री छन् भन्ने कुराको प्रामाणिकतामा निम्ति पर्याप्त हुन सक्छन् ।
सरकारले तीव्र आर्थिक विकास, समृद्धि र सुखी जनजीविकाको लक्ष्यमा अगाडि बढेको बताइरहँदा विकासको संवाहक मानिएको निजीक्षेत्र भने स्थायित्वको अनुभूति नै हुन नसकेको गुनासो पोखिरहेको भेटिन्छ । विकासको चालक मानिएको क्षेत्र नै स्थिरता, सुशासन र सुरक्षामा ढुक्क छैन भने त्यहाँ कस्तो खालको विकास र प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिएला ? लगानीका लागि लगानीमा लचकता र लगानीमैत्री कानूनी र भौतिक पूर्वाधार नभई हुन्न । तर, यसो भन्दैमा गैरकानूनी आर्जनलाई समेत स्वागत गर्ने भन्नेचाहिँ होइन । लगानीमा स्रोत र सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भलाई समेत नेतृत्वले आफूअनुकूल अपव्याख्या गरिरहेको पाइन्छ ।
उद्योगी व्यवसायीको भेलामै नेकपा अध्यक्ष दाहालले लगानीको रङ कालो वा सेतोजस्तो भए पनि उद्देश्य आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृष्टि हुनुपर्ने बताउनुले नेतृत्वको आशयमा पर्याप्त आशङ्का जन्मिन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिने तरखर गरिरहँदा निजीक्षेत्रकै एउटा जमघटमा एक पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन दिँदा केही नबिग्रिने, बरु आर्थिक अभिवृद्धिमा सघाउन नै पुग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीको यस्तो भनाइको निकै आलोचना भएको थियो । स्मरण हुन्छ, नेता बाबुराम भट्टराईले ठूला योजनामा आउने लगानीमा स्रोत खोज्न नहुने बताएका थिए । रकमको आकार र प्रकारमा स्रोतको अनिवार्यतालाई अपनाउन खोजिन्छ भने त्यसमा बदनियतले काम गरिरहेको हुन सक्छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सक्रिय संस्था एम्नेष्टी इण्टरनेशनलले नेपालमा हुने भ्रष्टाचारमा राजनीतिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा अगाडि देखाएको थियो । लगानी अभिवृद्धि गरी तीव्र गतिको आर्थिक विकासका अघि बढ्न सबैभन्दा पहिला स्थायित्वको अनुभूति हुनुपर्छ । राजनीतिक सङ्क्रमण समाधानसँगै आर्थिक सङ्क्रमणको शुरुआत भएकाले यसको व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । आर्थिक स्रोत व्यवस्थानको औजार करको भारी अभिवृद्धिलाई मात्र बनाउन खोज्दा सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा विस्तार हुन सक्छ । यो जोखीमप्रति नेतृत्व गम्भीर हुन खोजेको छैन । सङ्घीयता राजनीतिक र आर्थिक अधिकार विकेन्द्रीकरणको अद्यावधिक औजार भए पनि यसलाई चलाउने ढङ्ग राजनीतिमा नभएको आभास भइरहेको छ ।
लगानीलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन आर्थिक अभिवृद्धिको आधार हो । तर, कुल अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान वर्षेनि ओरालो लागेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उत्पादन अभिवृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बढावा दिने गफ जति नै दिए पनि व्यापारघाटाको बढ्दो आकारले तथ्यलाई उजागर गरेकै छ । बितेको वर्ष २०७४/७५ को १ वर्षको अवधिमा मात्र ११ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा देखिन्छ । यो आकार प्रत्येक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । रोजगारीको अभावमा जनशक्तिको पलायनबाट भित्रिएको विप्रेषणले बढाएको उपभोग व्यापारघाटा अभिवृद्धिको मूल कारण मानिएको त छ, तर आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धिका भरपर्दा आधार भेटिएका छैनन् । विप्रेषणको ९० प्रतिशत अंश उपभोग्य वस्तुको किनमेलमै सकिने तथ्याङ्क नेपाल राष्ट बैङ्कसँग छ । तात्पर्य, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारीका अवसर र आयात प्रतिस्थापनका लागि रणनीतिक योजनाको खाँचो छ ।
अहिले तहगत सकारहरूले सेवा प्रवाहभन्दा कर सङ्कलनलाई अग्रभागमा राखेकाले आमजनतामात्र होइन, उद्यमी व्यवसायीलाई समेत समस्या परेको छ । उद्यमीको मनोबल खस्किने काम राज्यबाट भएको छ । सरकारले दोहोरो कर नलाग्ने बताए कर प्रशासनका विरोधासले अन्योल उत्पादन गरिरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा निजीक्षेत्रको परामर्शलाई पूरै बेवास्ता गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । यसले कर नीतिप्रति आशङ्का र अलमलको आयतनलाई विस्तार गरिरहेको छ । यस्ता दृश्यले आर्थिक अभिवृद्धि र समृद्धिका निम्ति सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको आधारलाई कदापि बल पुग्दैन ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणमा चर्को ब्याजदर, गुणस्तरीय उर्जाको अभाव, अनुगमनका नाममा उद्यमी व्यवसायीलाई मानमर्दन गर्ने र आतङ्कितमात्र पार्नेजस्ता कार्यले सुख र समृद्धिको आधार निर्माणलाई सघाउँदैनन् । मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अघि बढिसकेको अवस्थामा पनि पञ्चायतकालका कानूनले शासन प्रशासन चलिरहेको छ । यसले पनि नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको सापेक्ष आर्थिक रूपान्तरणमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । यस्ता कानूनी विरोधाभासको तत्काल समाधान खोजिनुपर्छ । अद्यावधिक नियम निर्माणलाई तीव्र तुल्याएर सापेक्ष विकासका कानूनी पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्छ । उत्पादनका क्षेत्रका लगानीलाई आकर्षित गरी आर्थिक अभिवृद्धिको जगमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को उद्देश्यमा उभिन त नेतृत्वमा वाकपटुता होइन, आधार निर्माणमा आक्रामक कार्यशैलीको खाँचो छ ।